Semalt: Top 5 tranonkala sy tranonkala midadasika ao amin'ny Internet ao amin'ny Internet
Ny fitaovam-pifandraisana , manaisotra, ary mandinika ireo angona. Mahavariana mora foana ny fampahalalana mahasoa avy amin'ny toerana samihafa, indrindra fa ny angon-drakitra. Raha tsy fantatrao ny fomba entina manangona ny angona avy amin'ny tranonkala isan-karazany, dia manoro hevitra anao izahay amin'ny fampiasana ny tolotra maimaim-poana sy tranonkala mahaliana. Ny sasany amin'izy ireo dia maimaimpoana maimaim-poana, fa ny hafa kosa dia handoa anao amin'ny $ 20 hatramin'ny $ 100 isam-bolana arakaraka ny fepetra takinao.
Webhose. Izany dia manome fidirana mivantana amin'ny votoatin'ny tranonkala azo itokisana. Manampy anao hamoaka ny angona avy amin'ny lahatsoratry ny blaogy, ny lahatsary, ny mailaka ary ny tranokalam-baovao. Azonao atao ny manangona sy manara-maso ireo lohahevitra tena mahaliana sy mahaliana ao amin'ny Internet amin'ny fampiasana Webhose. io. Tsy tranokala habaka tsotra ity ity fa mpandroba lehibe ary mamoaka ny votoatiny amin'ny JSON, RSS, Excel ary XML. Ankoatra izany, Webhose. Izany dia ahafahantsika manasitrana haingana ny angon-drakitra ary mandinika ny fivoaran'ny tsena mba hahatonga anao ho vokatra mahaliana indrindra.
Dexi io dia serivisy tranonkala hafa sy fitaovana fitrandrahana ao anaty tranonkala hafa. Natao manokana mba handraisana ireo angona avy amin'ny tranonkala maro samihafa ary manampy anao hamonjy ireo vokatra ao amin'ny rahona. Azonao atao koa ny mampifandray ny fampahalalana amin'ny JSON, HTML, ATOM, XML ary ny raki-tsoratra RSS, mampitombo ny raharaham-barotrao ary mahazo ny valin'ny faniriana ao anatin'ny minitra vitsy. Ny ampahany tsara indrindra dia ity kisary ity dia hanome anao ny endriky ny fako toy ny solonanarana proxy, fanamafisana ny fanehoan-kevitra, ary ny kapila Captcha.
ParseHub dia tranonkala iray hafa mahasoa sy mipetaka amin'ny aterineto ao anaty aterineto. Natao ny hanangonana ny vaovao avy amin'ny tranonkala maro miaraka amin'ny Excel, CSV, JSON ary ParseHub API. Ankoatr'izany, miaraka amin'izany dia tsy mila manana fahaiza-manao fandaharana ianao. Manolotra sehatra maro samihafa toy ny fanarahana ny votoatin'ireo mpifaninana. ParseHub dia manome vahaolana samihafa momba ny varotra isan-karazany hanampy anao hifantoka amin'ireo mpanjifa manerantany. Ity dia fampiharana miorina amin'ny rahona ho an'ny filànao rehetra.
80legs dia mbola mitahiry ny angona angon-drakitra sy ny fandraketana tranonkala. Manolotra angon-drakitra avo lenta izy ary mampiditra ny herin'ny solosaina maherin'ny dimanjato sy arivo izay napetraka manerana izao tontolo izao. Tsy vitan'ny hoe mamerina ny angon-drakitra fotsiny izy io, fa manadino ihany koa ny pejin-tranonkalanao. Mila miorina fotsiny ny mpizara ary avelao ny 80legs hanao ny asany. Ny fikarakarana ity serivisy momba ny harena ankibon'ny tany ity dia mifototra amin'ny fangatahan'ny mpanjifa, ka mahatonga azy ho fitaovana mahomby ho an'ny fanombohana.
Import. io dia iray amin'ireo fitaovana fitrandrahana akoran-javatra tsara indrindra sy mahavariana indrindra ary fitaovana famafazana angona . Izany dia mamela anao manaisotra ny fampahalalana avy amin'ny tranonkala samihafa ary manolotra karazam-pandaminana maro samihafa toy ny taratra entina, fanaraha-maso ny vidiny, ny fampivoarana ny app, ny fikarohana ara-tsosialy, ny fianarana amin'ny masinina ary ny fikarohana akademika. Tsy mila manana fahaiza-manao programa hampiasana an'io fitaovana io ianao. Raha ny tena izy, dia tonga amin'ny interface-friendly sy mora-to-understand ny interface ary dia mamoaka ny angona ilaina ho anao ao anaty format malalaka. Import. io no safidy voalohany amin'ny orinasa samihafa, manam-pahaizana SEO, mpandrindra ny programa, mpamorona tranonkala, ary manam-pahaizana amin'ny media sosialy Source . Izany dia maminavina ny hetsiky ny mpanjifa ary mizara ny fivoaran'ny mpifaninana